CNC စက်များ- ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှု | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
CNC စက်များ- ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုလမ်းညွှန်
ဣဇာက်သည် | 15/04/2022 09:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 28/02/2022 17:50 | CNC
အ CNC စက်များသည် စက်မှုကဏ္ဍများနှင့် အလုပ်ရုံ မျိုးစုံကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာကြသည်။နှင့် မကြာသေးမီက ၎င်း၏အလားအလာအရှိဆုံးမျိုးကွဲများထဲတွင်လည်း ဖြစ်သည်- 3D ပရင်တာများ. ၎င်းကြောင့် ပစ္စည်းများသည် အကြွင်းမဲ့တိကျမှု၊ လျင်မြန်စွာနှင့် လက်စွဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့် ရရှိရန်ခက်ခဲသော ရလဒ်များဖြင့် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဤသည်မှာ ဤနေရာတွင် ဖော်ပြမည့် ဤစနစ်များ၏ အားသာချက်အချို့သာဖြစ်သည်။
1 CNC ဆိုတာဘာလဲ
2 CNC စက်တွေက ဘာတွေလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ
2.2 CNC စက်ဆိုတာ ဘာလဲ ?
2.2.1 input device ကို
2.2.2 ထိန်းချုပ်ရေးယူနစ် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ
2.2.3 tool တစ်ခု
2.2.4 ချိတ်ဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးမှုစနစ်
2.2.5 တုံ့ပြန်ချက်ကိရိယာများ (ဆာဗာမော်တာ)
CNC (Computerized Numerical Control) သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်လို Computer Numerical Control၊ ၎င်းသည် လူ၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအနည်းဆုံးဖြင့် ပစ္စည်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများကို စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျယ်ပြန့်သော အင်ဂျင်နီယာစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ CNC နည်းပညာသည် လက်ကိုင်ဘီးများ သို့မဟုတ် လီဗာများမှတစ်ဆင့် အမိန့်ပေးသည့်နည်းလမ်းများဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့် စက်ကိရိယာများအတွက် အလိုအလျောက်စနစ်ဖြစ်သည့် ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုမှ ဆင်းသက်လာသည်။ သို့သော်၊ ဤစက်များသည် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး ယခုအခါ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် ကွန်ပျူတာမှတဆင့် ၎င်းတို့၏ထိန်းချုပ်မှုကို ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါသည်။
ဤ CNC စနစ်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်နားလည်ရန်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ machining ကို အခြေခံထားသည်။ tool ၏ရွေ့လျားမှုကို သတ်မှတ်ပေးမည့် သြဒီနိတ်များ (ဖြတ်ခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်း၊ ကြိတ်ခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်း...)။ CNC စက်ကဲ့သို့ နားလည်နိုင်သည့် 3D ပရင်တာ၏ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဆင်တူသည်၊ ၎င်းသည် စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းအစား အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အတွက် ပစ္စည်းအလွှာများထည့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
3D ပရင်တာများကဲ့သို့ပင်၊ သင့်တွင် axes အများအပြားရှိနိုင်သည်။ X၊ Y နှင့် Zအလျားလိုက်၊ ဒေါင်လိုက်နှင့် အလျားလိုက် ရွေ့ပြောင်းမှုများကို အသီးသီးဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။ တချို့ကတဆင့် servomotors နှင့် / သို့မဟုတ် stepper မော်တာကိရိယာအား ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲလ်မှ ညွှန်ပြသည့် အတိအကျနေရာသို့ ရွှေ့မည်ဖြစ်ပြီး စက်ကို လျင်မြန်စွာနှင့် အမြင့်ဆုံးတိကျမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
CNC ကို မတီထွင်ခင်၊ကိရိယာများကို ကိုယ်တိုင်ကိုင်တွယ်ရန် အလုပ်သမား လိုအပ်သော်လည်း ပျက်ကွက်မှုများသည် အရည်အသွေး၊ ထပ်တလဲလဲနိုင်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းခြင်းတို့ကို ကျူးလွန်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပြတင်းပေါက်အတွက်ဘောင်များတူးလိုသော အလူမီနီယံဆိုင်ရှိ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ဤတာဝန်သည် လိုအပ်သည်-
အော်ပရေတာသည် အပိုင်းအစကို ကောက်ယူသည်။
သင့်လျော်သော bit ကို drill တွင်ထည့်ပါ။
အပေါက်တစ်ခုတည်းပြုလုပ်ရန် ဤအရာသည် ပြဿနာမဟုတ်သော်လည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထုတ်လုပ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အပေါက်များအားလုံး တူညီနေသည့်အပြင် ဖြစ်နိုင်သမျှ အတိုဆုံးအချိန်အတွင်း ၎င်းတို့ကို ရာနှင့်ချီ သို့မဟုတ် ထောင်နှင့်ချီ၍ ပြုလုပ်ရမည်ဟု စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ အဲဒီအခါမှာ လုပ်သားအင်အားက မလုံလောက်ဘူး၊ cnc စက်များ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ကြီးကျယ်သောတိုးတက်မှုများကို ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေတွင်၊ အဆင့်များသည်-
စက်ကို ပစ္စည်းဖြင့် ကျွေးကြောင်း သေချာပါစေ။ (တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၎င်းတို့သည် အလိုအလျောက် အစာကျွေးခြင်းပင် ဖြစ်နိုင်သည်)။
လိုအပ်သော ပရိုဂရမ်ဖြင့် စတင်ပါ (၎င်းသည် တစ်ကြိမ်သာ လိုအပ်ပြီး ထပ်ခါတလဲလဲ အရေအတွက်ကို ညွှန်ပြနိုင်သည်)။
အော်ပရေတာမှ ဝင်စွက်ဖက်စရာမလိုဘဲ လိုအပ်သလို အကြိမ်များစွာ ထပ်လုပ်ရန် သူမသည် ဖောက်ထွင်းမှုများကို တိကျစွာပြုလုပ်ရန် တာဝန်ယူမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, အော်ပရေတာထက် ပိုမြန်ပြီး အလုပ်မပင်ပန်းပါဘူး။ထို့ကြောင့် အားလုံးသည် စက်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အလုပ်ရုံအတွက် အားသာချက်များဖြစ်သည်။
CNC စက်တွေက ဘာတွေလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ
una CNC စက်သည် ကွန်ပြူတာ ကိန်းဂဏာန်းထိန်းချုပ်မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်သော စက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။. ဤနည်းအားဖြင့်၊ ပိုလီမာ၊ ဖိုမီ၊ MDF သို့မဟုတ် သစ်သားကဲ့သို့သော ပျော့ပျောင်းသော ပိုလီမာများ၊ ဖိုမီ၊ MDF သို့မဟုတ် သစ်သားကဲ့သို့သော ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများမှ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ကြိတ်ခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ နေရာယူခြင်း စသည်ဖြင့် တိကျသော သြဒီနိတ်များကို ချမှတ်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ် အလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့် အောင်မြင်ပါသည်။ စကျင်ကျောက်၊ သတ္တု၊ ကျောက်တုံး အစရှိတဲ့ ပိုခက်ပါတယ်။
အလားတူ၊ CNC စက်များသည် ခေတ်မီဆန်းပြားသော စနစ်တစ်ခုအတွက် ခွင့်ပြုသည်။ အဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီး ချိန်ညှိပေးသော တုံ့ပြန်ချက် ထိုသို့သောမကြာခဏ manual ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်ဘဲ machining အတွက်အသုံးပြုသည့်ကိရိယာများ၏အမြန်နှုန်းနှင့်အနေအထား။ အချို့သောအဆင့်မြင့်သည့်အရာများတွင်ပင် ပြဿနာများကိုရှာဖွေရန်၊ အလုပ် သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏အရည်အသွေးကို ထိန်းချုပ်ရန်၊ သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်း 4.0 ဖြစ်ပါက အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
CNC စက်အချို့ကို သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ မတူကြပါ။:
point to point control: ဤ CNC စက်အမျိုးအစားတွင်၊ လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီ၏ အစနှင့်အဆုံး အမှတ်များကို သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
paraxial ထိန်းချုပ်မှု: ၎င်းတို့တွင် အပိုင်းပိုင်းများ၏ ရွေ့လျားမှုအမြန်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
interpolate ထိန်းချုပ်မှု: ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ပုဆိန်နှင့်အပြိုင် မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို စက်ယန္တရားများကို လုပ်ဆောင်သည်။
ဒါ​ပေမဲ့ ဒါ​တွေ မဟုတ်​ဘူး။ cnc စက်အမျိုးအစားများအဲဒါကို နောက်လာမည့် post တွေမှာ အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်။
စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ပထမဆုံး စက်ယန္တရားသည် ဖြည်းဖြည်းချင်းအဆင့်မြင့်လာသော အခြေခံကိရိယာအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ လုံးဝလက်စွဲစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ထံမှ ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းစက်ရုံသည် ကိုယ်တိုင်အားထုတ်မှုကို သက်သာစေရန်၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးမြင့်လာစေရန်အတွက် စေ့ဆော်စွမ်းအားဖြင့် မောင်းနှင်သော စက်များဆီသို့ ကြီးမားသော ခုန်ကျော်သွားခဲ့သည်။
ဤစက်များသည် သိသိသာသာ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းမရှိသေးပေ။ လုပ်သားအင်အားအလွန်အရေးကြီးပါသေးသည်။ ယင်းက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထုတ်လုပ်ရာတွင် အချိန်ပိုယူရပြီး ကုန်ကျစရိတ်ပိုများကာ အမြတ်အစွန်းများနည်းပါးကာ ထုတ်လုပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးတွင် ရရှိသော အရည်အသွေးနှင့် တိကျမှုမှာ တစ်သားတည်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဆိုလိုသည်။
ထဲမှာ 40 နဲ့ 50 ရဲ့၊ ဂဏန်းထိန်းချုပ်စက်များကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် စတင်တီထွင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်သော John T. Parsons သည် ကြိတ်ခွဲထားသော ကတ်များမှ ထည့်သွင်းမှုဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်စေရန် ထိုအချိန်က ကြိတ်စက်ကို ပြုပြင်မွမ်းမံပြီး ယနေ့ခေတ် မမ်မိုရီနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်၏ ရှေ့ပြေးဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် စက်များသည် အစိတ်အပိုင်းကို စက်ပြုလုပ်ရန် ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ရမည့် တိကျသော လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရရှိခဲ့ပြီး လီဗာများ၊ စတီယာရင်ဘီးများ စတီယာရင်များကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် လူ၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများစွာ မလိုအပ်ပေ။
၎င်းသည် Parsons စက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ယနေ့ခေတ် CNC စက်များ၏ ရှေ့သွားများ ခေတ်မီ။ သို့သော် ၎င်းသည် လေဟာနယ်အဆို့ရှင်များကို အသုံးပြု၍ အီလက်ထရွန်းနစ် analog ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ပါရှိသော အလွန်အခြေခံကျသော ကြိတ်စက်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အစိုင်အခဲ-စတိတ်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ ရင့်ကျက်မှုနှင့်အတူ ဤစနစ်များသည် ပိုမိုရေပန်းစားလာပြီး အဆင့်မြင့်လာသည်။ လေဟာနယ်ပြွန်များမှ ထရန်စစ္စတာများအထိ၊ ထရန်စစ္စတာမှ ပုံနှိပ်ဆားကစ်များအထိ၊ ထို့နောက် ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ်များအထိ၊ မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာများ (MCU) များ တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုရလောက်အောင် စျေးပေါလာသည်။
ထို့နောက် CNC စက်များသည် အလိုရှိသောအတိုင်း machining values ​​များကို ကွဲပြားစေရန်အတွက် ပိုမိုထက်မြက်ပြီး ပရိုဂရမ်မာစနစ်များဖြင့် မွေးဖွားလာခဲ့သည်။ ၌ 70 ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိထားသော CNC စက်များသည် ကွန်ပြူတာမှ အမိန့်ပေးသော စက်များရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ဤအခြားကြီးမားသောမှတ်တိုင်ကြောင့်၊ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှ အလိုလိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်၊ ဆန္ဒရှိသည့်အခါ ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုရန် ပရိုဂရမ်အမျိုးမျိုးကို ပရိုဂရမ်များ၊ ကန့်သတ်ဘောင်များကို အမြန်ပြုပြင်ရန်စသည်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်တွင်၊ cloud ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် IoT (Internet of Things) သို့မဟုတ် အရာများ၏အင်တာနက်တို့နှင့်အတူ၊ စက်ပစ္စည်းအများအပြားကို cloud သို့ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပိုမိုထက်မြက်သောနည်းလမ်းဖြင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည် ။ အခြားတစ်ခုသို့ နည်းလမ်းပေးခြင်း၊ စက်မှု 4.0CNC စက်များသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စက် သို့မဟုတ် အဆင့်တစ်ခုခုတွင် နှောင့်နှေးမှု သို့မဟုတ် ပြဿနာ ကြုံတွေ့ပါက၊ စွမ်းအင်ချွေတာရန် စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်တွင် ၎င်းတို့သည် ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်တွင် အချင်းချင်း ဆက်သွယ်နိုင်သည်၊ သို့မှသာ ၎င်းတို့၏ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ကို ချိန်ညှိရန် လိုအပ်ချက်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ စသည်တို့။
CNC စက်ဆိုတာ ဘာလဲ ?
အသေးစိတ်အချက်များနဲ့ပတ်သက်လာရင် CNC စက်၏ အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများအောက်ပါ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်များကို ကိုးကားနိုင်သည်-
input device ကို
ဒါဟာအဖြစ်လူသိများသည် ထည့်သွင်းကိရိယာ CNC စက်မှသည် machining လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဒေတာကို တင်ရန် သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံရန် အသုံးပြုသည့် စနစ်သို့။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် ထိန်းချုပ်မှုဘောင်၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင် စသည်တို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ စက်အော်ပရေတာအား စက်ကိုဖွင့်ရန်နှင့် ထိန်းချုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့် interface တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိန်းချုပ်ရေးယူနစ် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်အီလက်ထရွန်းနစ်စနစ် ၎င်းသည် ဝင်ရောက်လာသော ဒေတာများကို ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းနှင့် servomotors များ၏ ရွေ့လျားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် အချက်ပြမှုများ ဆက်တိုက်ထုတ်ပေးခြင်းတို့ကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူမှ ထည့်သွင်းထားသည့် ပရိုဂရမ်ကို အတိအကျလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် servomotors များ၏ ရွေ့လျားမှုကို ထိန်းချုပ်မည်ဖြစ်သည်။
La tool တစ်ခု ၎င်းသည် စက်ယန္တရားကို အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်သော၊ စီမံဆောင်ရွက်နေသော အပိုင်းနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသော အရာဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Multi-Tool Head တစ်ခုဖြစ်ပြီး မတူညီသော အလုပ်များစွာကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်း ပုံသေ သို့မဟုတ် လဲလှယ်နိုင်သော ကိရိယာတစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ- တူးစက်၊ ဖြတ်စက်၊ ကြိတ်ဖြတ်စက်၊ ဂဟေဆက်သည့် ထိပ်ဖျား၊ စသည်တို့။
ထို့အပြင်၎င်းတို့၏စည်းကမ်းချက်များအရ CNC စက်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ အမျိုးအစားနှင့် axles အရေအတွက်:
ဝင်ရိုး ၄: X၊ Y နှင့် Z ဝင်ရိုးများဖြင့် အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။
4 axes: A axis ကိုယခင်သုံးခုသို့ထည့်သောအချို့သော routers သို့မဟုတ် CNC router များကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မျက်နှာပြင် သုံးခုကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း လုပ်ဆောင်ရန်၊ ဗိုင်းလိပ်တံအား ဘယ်မှညာသို့ ရွေ့လျားစေပြီး ပြားချပ်ချပ် သို့မဟုတ် 3D ဖြင့် ရေးထွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် သစ်သား၊ သတ္တုများ၊ ရှုပ်ထွေးသောပုံစံများ စသည်တို့ကို ထွင်းထုရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
rotary ဝင်ရိုး- ၎င်းတွင် မျက်နှာပြင်လေးခုကို တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်နိုင်စေမည့် ကိရိယာအတွက် လှည့်ပတ်ထားသော spindle တစ်ခုပါရှိသည်။ ဤစက်အမျိုးအစားများကို ဆလင်ဒါအစိတ်အပိုင်းများ၊ သစ်သားရုပ်တုများ၊ ရှုပ်ထွေးသော သတ္တုဒြပ်စင်များ စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုပါသည်။
ချိတ်ဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးမှုစနစ်
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် စက်မရွှေ့ဘဲ စက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကျောက်ချရပ်နားသည့်နေရာ. စနစ်ပေါ် မူတည်၍ ကျောက်ဆူးများ ပါရှိသည် သို့မဟုတ် မပါဘဲ အမျိုးအစားများ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ အချို့သောအပိုင်းများတွင် ဖြတ်သန်းသွားသည်နှင့် ဂျက်လေယာဉ်၏ တွန်းအားကို ဖြတ်သန်းသွားသောအခါတွင် ရေစည် သို့မဟုတ် ရေလှောင်ကန်တစ်ခု လိုအပ်မည့် ဖုန်စုပ်စနစ်များ၊ သို့မဟုတ် ရေဂျက်ဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့သော အပိုပစ္စည်းများ လိုအပ်ပါသည်။
ဤစနစ်များကို မကြာခဏခေါ်သည်။ အိပ်ရာ သို့မဟုတ် စားပွဲလည်းရှိသည်။. အများစုကို စားပွဲပေါ်တွင် ချိတ်ထားရန်၊ ဆလင်ဒါများ သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသော ပုံသဏ္ဍာန်များလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သောအခါတွင် ၎င်းတို့အား အများအားဖြင့် အလူမီနီယမ်ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ယင်းအစား၊ လေဟာနယ်အိပ်ရာ သို့မဟုတ် စားပွဲသည် အပိုင်းကို ကုပ်စရာမလိုဘဲ လေဟာနယ်ဖြစ်ကာ တိကျမှုပိုမိုမြင့်မားစေရန်၊ အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း စိတ်လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးခြင်းနှင့် လွတ်လပ်မှုပိုမိုရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
ဤကိရိယာအမျိုးအစားများသာရှိသည်။ CNC စက်များအတွက်တုံ့ပြန်ချက် servo မော်တာများကိုအသုံးပြုသည်။ တခြားသူတွေမှာတော့ မလိုအပ်ပါဘူး။
အထက်ပါအချက်များအားလုံးအပြင်၊ သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ် စောင့်ကြည့်ရေးစနစ် စက်ယန္တရားလုပ်ငန်းစဉ်ကိုယ်တိုင်။ ၎င်းသည် ၎င်းလုပ်ဆောင်နေသည့် သို့မဟုတ် အမှီအခိုကင်းသည့် တူညီသောအင်တာဖေ့စ်မှတဆင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
အထက်ပါအချက်များအပြင် သတိထားသင့်သည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဒြပ်စင်နှစ်ခု ပေါင်း:
အင်ဂျင်: ထိန်းချုပ်ယူနစ်မှရရှိသောဒေတာအရ စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာကို ရွှေ့ခြင်း သို့မဟုတ် အသက်သွင်းသည့်ကိရိယာများဖြစ်သည်။
Servo: မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့်သင်ဖြတ်ခြင်း၊ တူးခြင်းစသည်တို့ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သော၊ တည်ငြိမ်သောအလုပ်အတွက်နှင့် ရှုပ်ထွေးသောပုံစံများအတွက် စံပြဖြစ်သည်။
stepper: ဤ Stepper မော်တာများသည် စျေးနှုန်းသက်သာသော်လည်း အခြေခံ ထွင်းထုခြင်း သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှုအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ထိန်းချုပ်ရလွယ်ကူသည်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး အလွန်တိကျသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို တိကျမှုအများဆုံးလိုအပ်သည့်နေရာတွင် သင့်လျော်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။
ဗိုင်းလိပ်တံCNC စက်တစ်ခု၏ ဤဒြပ်စင်တွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အအေးခံခြင်း သို့မဟုတ် အအေးပေးစနစ် နှစ်မျိုးရှိသည်။
လေကြောင်းဖြင့်: ၎င်းတို့ကို ဗိုင်းလိပ်တံကို အေးစေသော ပန်ကာဖြင့် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အအေးခံပြီး စျေးသက်သာပြီး ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။
ရေအားဖြင့်အအေးခံရန် ရေကို အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းသည် ပို၍စျေးကြီးသည်၊ ရှုပ်ထွေးသည်၊ ထိန်းသိမ်းရန်ခက်ခဲသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ယေဘူယျအားဖြင့်ကြာရှည်သည်၊ ပိုထိရောက်သည်၊ ဆိတ်ငြိမ်သည်။
CNC စက်အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် အသုံးချနည်း
ပုံတူရိုက်ခြင်းနှင့် CNC ဒီဇိုင်း
CNC router နှင့် CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းအမျိုးအစားများ
အခြား CNC စက်များ- တူးဖော်ခြင်း၊ Pick & Place၊ ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် အခြားအရာများ
CNC စက်သည် ကုမ္ပဏီအတွက် မည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း။
ဝယ်ယူခြင်းလမ်းညွှန်- အကောင်းဆုံး CNC စက်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
ကြံစည်သူများ၏ တိကျသေချာသော လမ်းညွှန်ချက်- ကြံစည်သူသည် အဘယ်အရာနှင့် ၎င်းအတွက် ရည်ရွယ်သနည်း။
အားလပ်ချိန်နှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုရန်အတွက် အကောင်းဆုံး CNC စက်များ
အကောင်းမွန်ဆုံး ဖြတ်တောက်ခြင်း ကြံစည်သူများ
အိုးထိန်းစက်များအတွက် အကောင်းဆုံး စားသုံးနိုင်သော ပစ္စည်းများ- ကျည်တောင့်များ၊ စက္ကူ၊ ဗီနိုင်းနှင့် အပိုပစ္စည်းများ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » CNC » CNC စက်များ- ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုလမ်းညွှန်